Ahoana ny fomba hifehezana ny filan'ny siramamy sy ny fanoherana ny Leptin - ny fikolokoloana ara-pahasalamana
Home » Blog » Ahoana ny fomba hifehezana ny filan'ny siramamy sy ny fanoherana ny Leptin
Olona tsy tambo isaina manerantany no mahazaka leptin, ary maro no tsy mahalala an'io. Ny drafitry ny sakafo maoderina mahazatra dia singa iray lehibe. Ny fihinana siramamy, voam-bary ary sakafo voaharo be dia be dia mitarika ny sela matavy hameno rano amin'ny leptin. Ataovy ampy tsara izany, ary miovaova ny vatana amin'ny alàlan'ny fanoherana ny leptin.
Ity fomba fiasa ity dia miasa toy izany koa amin'ny fomba mahatonga ny olona tsy ho voan'ny insuline. Mahatsiaro marary ianao, trotraka ary mosarena amin'ny fotoana rehetra– na dia mihinana mihoatra noho izay ilain'ny vatanao aza ianao. Raha manana faniriana hanina foana ianao ary mitady maivana tsy tapaka hanandrana anao mandra-pahatongan'ny fotoam-pisakafoanana, dia azo inoana fa mahazaka leptin ianao.
Tsy voafehy ny filan'ny sakafo (faniriana manokana amin'ny sakafo tsy mahasalama) ny soritr'aretin'ny fanoherana leptin. Manoro hevitra anao izahay mba hiezaka ny hamoaka ny sakafonao mba hisy adiny efatra farafahakeliny eo anelanelany, ary aza avela hihinan-kanina na inona na inona ianao. Raha sarotra ho anao izany dia misy vintana lehibe azo atao raha mahatohitra leptin ianao. Ny tsy fahampian'ny torimaso sy ny tsy fihinanan-kanina dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fanoherana ny leptin.
Raha misakafo ianao ary manandrana mampihena ny lanjany haingana, dia mety hamatotra ny fanoherana leptin amin'ny fomba goavana izany. Mampihetsi-po tokoa ny manapaka tampoka ny fatran'ny kaloria anao rehefa manandrana mampihena ny lanjanao ianao. Na izany aza, na oviana na oviana ny fameperana kaloria tafahoatra dia mety hihemotra, ka mahatonga ny vatanao hizatra amin'ny fiafarana mahatohitra kokoa ny leptin. Izany dia vokatry ny fanovana calorie tampoka, ny vatanao dia manao izay rehetra azony atao mba hitazomana ny tavy voatahiry. Mitranga amin'ny olona marobe tsy nahy izany rehefa manandrana manova ny sakafo Paleo malaza tsy mampino izy ireo.
Ny fitambaran'ny fihenjanana mafy sy ny tsy fahampian'ny torimaso dia mampiakatra ny kortisol sy ny haavon'ny hormoninao. Ny kortisol bebe kokoa dia miteraka fihenjanana bebe kokoa ary tsy dia hatory loatra, mitarika tsingerina ratsy izay mifarana toy izany isaky ny mandeha: fahasalamana ratsy. Raha tsy mandray andraikitra hiatrehana ny adin-tsainao ianao na hatoriana farafahakeliny 7 na adiny valo isan'alina, dia manao ny tsy rariny ianao. Ny haavon'ny kortisol avo dia miteraka fanoherana leptin, ary rehefa tsy voafehy, dia mety hiteraka hatavezina, fivontosana ary loza mitatao amin'ny aretim-po.
Raha mandany siramamy be loatra ianao na izany aza, dia mety ho anisan'ny lafin-javatra voalohany amin'ny fanoherana ny leptin io. Ny siramamy dia mety hanimba ny fahasalamanao amin'ny fomba maro. Misy zavatra tsotra fotsiny momba ny siramamy izay manantona antsika ary manelingelina antsika hatrany hatrany. Na tiantsika na tsia ny siramamy dia mitazona antsika lehibe. Raha mamaky an'ity ianao dia azo inoana fa azonao izany, ary manana traikefa voalohany, io manintona io. Ny siramamy dia tsy confectionery fotsiny, fa an-tery; tsy misy ny fijanonana aorian'ny vokatra siramamy "iray fotsiny" ..
Nomena antony marobe amin'ny filan'ny fary isika: ny fivelaran'ny ati-doha mitady fahafinaretana, tsy fahampiana mineraly, katsentsitra ny tsinay, tsy fanjarian-tsakafo, drafi-pisakafoanana tsy voalanjalanja, fihetsika mahazatra, sira be loatra, olana ara-pientanam-po, tsy fahampian'ny torimaso, fihenjanana… tsy fifehezana. Tsy very maina isika noho ny antony fiankinan-doha amin'ny siramamy, nefa ny fahalalana tsy ampy hanovana antsika na ny fitondran-tenantsika. Raha ampy ny fahalalana dia hahazo medaly volamena sy kintana volamena isika amin'ny toerana rehetra amin'ny fiainantsika. Raha misy, ny fahalalana dia vao mainka mahatonga azy hahatsiaro ho ratsy kokoa… fantatsika tsara kokoa noho izany, maninona isika no tsy manao tsara kokoa? Ny fahatakarana dia miafara amin'ny anton-javatra iray hafa fotsiny hahatsapantsika ho ratsy amin'ny tenantsika.
Ny hetsika manaraka ny fahatakarana dia ny manandrana sy mitady vahaolana amin'izany. Raisinay an-tananay manokana ny raharaha ary ezahinay hivadika ilay switch fitiavana ny siramamy. Tsy dingana tsy misy fanaintainana io, ary rehefa tsapantsika fa manao tany isika dia misy zavatra manilika antsika ary eo am-panirahana misiônera izahay mba hamindra izay siramamy hitantsika ary hiverina amin'ny voalohany.
Rehefa misafidy ny kendrena miankina amin'ny siramamy isika dia manafika ny siramamy ihany, manadio lakozia, manafoana ny trano amin'ny entana rehetra ary manambara ny siramamy ho fahavalo. Ary tsara izany… raha tsy mandeha izy. Rehefa mamolavola drafitra mihetsika toa izao isika, dia hetsika roa mialoha loatra ary mifanehatra amin'ny torolàlana diso. Tsy miresaka izay tena zava-misy marina izahay.
Ny tsiambaratelo: kendrena ny tena olana, tsy ny voka-dratsin'ilay olana. Ary ny faniriana siramamy no voka-dratsiny, izy ireo no mariky ny tena olana, ary ny fitsaboana ny fambara dia tsy mahasakana ny olana velively. Ny fomba tokana hampiroboroboana ny fanovana marina sy maharitra dia ny fijerena ny fototr'ireny kitrotro siramamy mampidi-doza ireny… raha tsy izany dia mandany fotoana fotsiny ianao ary miomana amin'ny fividianana siramamy hafa amin'ny ho avy.
Inona no antony fototra? Ny fanoherana leptin izay noresahintsika teo aloha. Ny fomba iray hifehezana ny filan'ny siramamy sy ny fanoherana ny leptin dia ny leptitox fanampin-tsakafo voajanahary, izay fifangaroan'ny 22 akora voajanahary voajanahary rehetra mifandraika amin'ny vatanao mba hamadihana ny fanoherana leptin ary vokany izany. Rehefa misy fanoherana leptin ao amin'ny vatantsika dia manana rafitra tsy mandeha amin'ny laoniny isika. Ity fahatapahana ity dia hiteraka soritr'aretina manahirana. Tsy ny fanoherana leptin fotsiny no mampisondrotra ny fahazotoan-komana fa miteraka filan-dratsy! Izany no fomba fahandro amin'ny loza! Tsy ho mosarena fotsiny ianao fa maniry ny karazan-tsakafo ratsy indrindra…
Mety nomenay tsiny ny zavatra rehetra rehetra eto ambonin'ny tany amin'ny tsy fahafahantsika mijanona tsy hahatratra ny cookie manaraka… ny zava-drehetra afa-tsy ny fanoherana leptin. Raha te-hahita fihetsika tena izy ianao ary hanova dia mila mikendry ny fanoherana leptin ary manao zavatra "hanamboarana" azy.
Leptitox dia lalana iray fotsiny hametrahana ny olana mitombo amin'ny fanoherana ny leptin, satria heverina fa novokarina ho lasibatra sy hiatrehana izany. Ny leptitox dia fifangaroana amin'ny 22 voafantina tsara, asidra amine ary otrikaina miaraka amin'ny fahaiza-manampy amin'ny vatanao hamahana ny tena antony mahatonga ny fanoherana ny leptin. Hanova izay rehetra noheverinao fa fantatrao momba ny fihenan'ny lanjany.
Ireo akora 22 ao amin'ny Leptitox dia miara-miasa manao zavatra 3: manampy ny detox amin'ny vatana, mifehy ny filana ary mampiroborobo ny fihenan-danja. Ny fatra isan'andro dia pilina 2 nalaina indray mandeha isan'andro, ary nanoro hevitra anao ny hisotro ireo kapsily 2 20-30 minitra alohan'ny hisakafoanao. Raha vaovao vao mandray fanampim-panazavana ianao dia manoro hevitra anao izahay mba hametraka fanairana amin'ny telefaoninao mba hanoro hevitra anao hitondra azy ireo alohan'ny sakafo.
Raha misalasala ianao amin'ny fandinihana ity vokatra ity dia mampiasa vola hiverina 60 andro feno i Leptitox ka tsy hanana zavatra very mihitsy ianao raha tsy mety aminao ity famenony ity. Baiko Leptitox anio dia andramo ho anao.
Oktobra 27, 2019 Admin Blog, fanampin-tsakafo Tsy asian-teny